ကိုဩဒိနိတ်: 24°N 45°E﻿ / ﻿24°N 45°E﻿ / 24; 45
ٱلْمَمْلَكَة ٱلْعَرَبِيَّة ٱلسَّعُوْدِيَّة (အာရပ်)
ဆောင်ပုဒ်: لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱلله، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ ٱلله
"There is no god but God; Muhammad is the messenger of God."[မှတ်စု ၁] (Shahada)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: ٱلنَّشِيْد ٱلْوَطَنِي ٱلسَّعُوْدِي
၉၃.၀% အစ္စလာမ် (တရားဝင်)
ပြည်ထောင်စု အစ္စလာမ်မစ် သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်
ဆာမန် ဘင် အဗ္ဗဒူလာဇီ
မိုဟာမက် ဘင် ဆာမန်
• ပထမ ဆော်ဒီနိုင်ငံ
• ဒုတိယ ဆော်ဒီနိုင်ငံ
၁၉၀၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်
၁၉၃၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်
• ကုလသမဂ္ဂ သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း
• လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံ
၁၉၉၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်
၂,၁၄၉,၆၉၀ km2 (၈၃၀,၀၀၀ sq mi) (အဆင့်: ၁၂)
၃၄,၂၁၈,၁၆၉ (အဆင့် - ၄၀)
၁၅/km2 (၃၈.၈/sq mi) (အဆင့် - ၁၇၄)
$၁.၉၂၄ ထရီလီယံ (အဆင့် - ၁၄)
$၅၆,၈၁၇ (အဆင့် - ၁၂)
$၇၇၉.၂၈၉ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၈)
$၂၃,၅၆၆ (အဆင့် - ၃၅)
အလွန်မြင့် · ၄၀
ဆော်ဒီ ရီယယ် (SR) (SAR)
ဆော်ဒီ အာရေဗျနိုင်ငံမှာ ဟက်ဂျက်နိုင်ငံနှင့် နက်ဂျနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံကို ပူးပေါင်းထားခြင်းဖြစ်၏။ ၁၉၂၆ ခုနှစ်၌ ထို နှစ်နိုင်ငံကို ပူးပေါင်းပြီးလျှင်၊ သူ၏ အမည်ကိုအစွဲပြုကာ၊ ဆော်ဒီ အာရေဗျနိုင်ငံဟု တွင်စေ၏။ ဟက်ဂျက်နိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်ကို အတိအကျမကန့်သတ်ရသေးသောကြောင့် ဆော် ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ အကျယ် အဝန်းသည် စတုရန်းမိုင် ၉၇၂ဝဝဝ ထက်မပိုဟုခန့်မှန်းကြသည်။ နက်ဂျနိုင်ငံ၏ အလယ်ပိုင်းရှိ ကုန်းမြေမြင့်သည် ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ဖက်သို့ နိမ့်ဆင်းသွား သည်။ ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့တစ်ဝိုက်၌ ကျယ်ပြန့်သော မြေနိမ့် လွင်ပြင်ရှိသည်။ အနောက်ဘက်ရှိ ပင်လယ်နီကမ်းခြေမှာ ကျဉ်း မြောင်းသော သဲကန္တာရ မြေနိမ့်ပိုင်းဖြစ်၏။ ထိုကမ်းမြောင်ဒေသ အနောက်ဘက်တွင် ဟက်ဂျက်တောင်တန်းရှိသည်။ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၌ မြစ်ကြီးများမရှိချေ။ ချောင်းငယ် တို့မှာလည်း ခန်းခြောက်နေသည်သာများ၏။ ရာသီဥတုမှာ ခြောက်သွေ့လှသည်။ နှစ်စဉ်ရွာသွန်းသော မိုးရေချိန်မှာ ပျမ်းမျှ ခြင်းအားဖြင့် ၁ဝ လက်မအောက်သာဖြစ်၏။ ရံဖန်ရံခါရွာသော မိုးကြောင့် သစ်ပင်ငယ်များ ကျိုးကျဲပေါက်ရောက်၏။ အိုအေစစ်များတွင် စမ်းချောင်းနှင့် ရေတွင်းများရှိသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ သဲကန္တာရမြေချည်း လိုလိုပင်ဖြစ်၏။ သို့သော် ထိုသဲမြေများအောက်ရှိ ရေနံကြောင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာတွင် အရေးပါအရာရောက်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ ရေနံတွင်းများကို နိုင်ငံတဝှန်းလုံး တွင်တွေ့ရ၏။ ရေနံတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကို ဂရိတ်ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံတို့မှ ရေနံကုမ္ပဏီကြီး များက ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေပေသည်။ ထိုနိုင်ငံမှ ထွက်ကုန်မှာ ပျားရည်၊ စွန်ပလွံသီး၊ သားရေစိမ်း၊ သိုးမွေး၊ မီးသွေးနှင့် ထောပတ်တို့ဖြစ်၏။
↑ The Shahādah (Statement of faith) is sometimes translated into English as 'There is no god but Allah', using the romanization of the Arabic word Allāh instead of its translation. The word Allāh (အာရပ်: ٱلله‎) literally translates as the God, as the prefix 'Al-' is the definite article.
↑ There isaConsultative Assembly, or Shura Council, which has no legislative power. As its role is only consultative it is not considered to bealegislature.
↑ About Saudi Arabia: Facts and figures။ The Royal Embassy of Saudi Arabia, Washington, DC။ 17 April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ * God။ Islam: Empire of Faith။ PBS။
L. Gardet။ "Allah"။ Encyclopaedia of Islam Online။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Saudi Arabia. The World Factbook. Central Intelligence Agency.
↑ Basic Law of Governance။ Ministry of Education – Kingdom of Saudi Arabia။
↑ The World Factbook (2 July 2014)။6January 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Saudi Arabia - The World Factbook။ CIA။
↑ Hefner၊ Robert W. (2009)။ Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization။ Princeton University Press။ p. 202။ ISBN 978-1-4008-2639-1။
↑ Analysts: Saudi Arabia Nervous About Domestic Discontent။ VoA News - English။
↑ The total population – General Authority for Statistics။3April 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ ၁၀.၃ Saudi Arabia။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ The World Factbook။ Central Intelligence Agency။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ&oldid=726315" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။